Lọ ọrụ Gratings - China Gratings Manufacturers, Suppliers
SC-1606 Igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere na Drain mere site na emeputa nke china
* Nwere ike ịbụ ọkachamara ahaziri dị ka ndị ahịa mkpa.
* Nkọwapụta ngwaahịa niile na-ezo aka na ndị na-esonụ.
* Ventilation, ọkụ, mgbasa mmiri, enweghị amị amị, ezigbo mgbawa.
* Mfe iji wụnye na ebukọtala.
* Nlereanya nwere ike ịbụ onye ahịa mere.
SC-1604 Anti-corrosion igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere na Drain mere site China factory
* Ngwaahịa a nwere nnukwu ibu na-ebu ikike na ihe onwunwe na-egbochi mmetụta.
* Ikpuchi na etiti jikọtara ya na ihe mgbakwasa. Ọ bụ mgbochi ohi, nchebe, ma dịkwa mfe imeghe.
* Ọ bụrụ na-eji ígwè, Nnukwu ebe maka mmiri leakage na-ekpo ọkụ-mikpuo galvanizing elu ọgwụgwọ, mara mma na inogide.
* Ọmarịcha ọdịdị, elu ala na-egbu maramara
* Typedị ígwè ji kpachie oghere
W-mgbali welded ji kpachie oghere
L-mgbali ekpochi ji kpachie oghere
C-anya ịgbado ọkụ ji kpachie oghere
Professional Metal Building Materials igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere
Nke a anaghị agba nchara ji kpachie oghere bụ otu n'ime anyị kasị ama iche iche, mere site Triangle alaka imewe. Nzube a nwere uru nke ime ka oghere nke uzo di elu, ma mmiri ga-aga nke oma karie udiri ala. Ihu a dị mma ọbụna maka obere akpụkpọ ụkwụ dị larịị dị larịị iji jee.
Ihe eji eme akwa ihe di elu 304 ma obu 316 igwe anaghị agba nchara nchara
Igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere, e mere na-multi-ahịrị nke ewepụghị oghere, mara na nkenke na ọmarịcha rụọ rụọ bụ isi na-eji maka ime ụlọ na anyị. Igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere dị na a dịgasị iche iche nke imewe maka mma na drainage usoro, izute aesthetic na ndị bara uru niile na otu.
SC-1607 ọma e drainage ọwa igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere Drainaji Trenchi Cover
Igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere, makwaara dị ka welded igwe anaghị agba nchara Bar Grate dị mma Ọmarịcha rụọ na inogide niile ibu-amị ngwa na-bụ-eji maka ime ụlọ na n'èzí. Igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere dị na a dịgasị iche iche nke amị mmanya spacing na ọkpụrụkpụ dabere na ngwa na ibu chọrọ.
Ahaziri Special Shape igwe anaghị agba nchara ji kpachie mmiri tank mmiri ọwa China Factory
Nke a na ụdị nke igwe anaghị agba nchara ji kpachie oghere ka site arọ ọrụ imewe na-ọdịnaya iji chebe megide corrosion, huu anwụ ngwa ngwa na ntụkwasị obi. Emere ya site na igwe di elu 304 ma obu 316 nchara di nma ya.
Handrails, Vetikal Handrail brackets, Handrail Base efere, Nzọụkwụ Aka Aka, Igwe anaghị agba nchara Handrail, Igwe anaghị agba nchara Igwe Mbuliaka Handrail,